I-Xiaomi Mi Mix 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Kwezi veki besifumana idatha eninzi malunga neXiaomi Mi Mix 3, ukuze phambi kokunikezelwa kwayo sele sinalo lonke ulwazi malunga nale modeli intsha ivela kumenzi waseTshayina. Okokugqibela, ukuhanjiswa kwesixhobo sele kwenzekile. Le modeli intsha yentsimbi sele isemthethweni. Ngesi sizukulwana sitsha, uphawu lukwazile ukwazisa izinto ezintsha kwifowuni yalo, ngokungathandabuzekiyo enceda ukuvelisa umdla phakathi kwabasebenzisi.
Le Xiaomi Mi Mix 3 yifowuni ethatha umxholo wescreen sonke ukuya kwinqanaba elitsha. Kuba inesikrini esityibilikayo, esivumela ukuba uthathe ithuba elipheleleyo lenjongo, ngaphandle kwesidingo senotshi. Ukongeza, iyahambelana ngokupheleleyo kwinqanaba lobugcisa.
Sijonge isixhobo esifikelela kwelona khathalogu liphezulu Uhlobo lwesiTshayina. Ke le modeli ayidanisi konke konke ngokweenkcukacha. Siza kuthetha ngazo kuqala, ukuze ubone ngcono ukuba ifowuni isilungiselele ntoni.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi Mix 3
2 IXiaomi Mi Mix 3: Ukuvela koluhlu
Ukucaciswa kweXiaomi Mi Mix 3
Inyani yile yokuba kwinqanaba lobuchwephesha, le Xiaomi Mi Mix 3 ijongeka kakhulu njengezinye iimodeli zokugqibela esizibonileyo kwintengiso kulo nyaka. Ewe kukho umahluko, njengoko sibonile kuyilo lwefowuni. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Ukucaciswa kobuchwephesha Xiaomi Mi Mix 3
Umzekelo Mi 3 Mix
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo ene-MIUI 10
Isikrini I-intshi ye-AMOLED 6.39 ene-HD epheleleyo + isisombululo se-1080 x 2340 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 845
i-ram 6 / 8 / 10 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi 128 / 256 GB
Ikhamera esemva I-12 + 12 MP enezinto f / 1.8 kunye f / 2.4
Ikhamera yangaphambili I-24 + 2 MP ngokuvula f / 1.8
Conectividad I-4G / LTE (kungekudala iza kuba ne-5G) ye-SIM ezimbini zeBluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac Uhlobo lwe-C
Ezinye izinto I-NFC 3D ye-facial sensor yomva wokufunda ngomnwe wokuhambisa umzimba ukuhambisa ikhamera
Ibhetri I-4.000 mAh ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokutshaja ngokukhawuleza
Ixabiso I-416 euro ukuyitshintsha
Uyilo lwesi siphelo siphezulu luyamangalisa, kuba iXiaomi Mi Mix 3 ihambe inyathelo elingaphaya kwingcinga yescreen sonke. Uphawu lwaseTshayina lususile ezantsi kwayo, kwaye ndibeke ikhamera yangaphambili ngaphakathi kwifowuni. Esi sixhobo sokutyibilika sinesandi esibonakalayo xa kuvulwa kwaye kuvalwa ifowuni. Ngaphandle koko, uyilo lugcina imigca emihle ebonakala kolu luhlu lweefowuni.
Bakhethe iglasi enamacala amabini, esinokuthi siyibone inceda ukunika ifowuni ukubonakala kwepremiyamu. Nantsi ke into ivumela isixhobo ukuba sibize ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Ndiqinisekile baninzi bonwabile sesi sigqibo senziwe ngumenzi wase China.
IXiaomi Mi Mix 3: Ukuvela koluhlu
Le Xiaomi Mi Mix 3 ithatha ithuba elingaphezulu kumhlaba owufumanayo enkosi kule ndlela yokuhambisa. Basebenzisa ithuba lokudibanisa inkqubo yokwamkelwa kwe3D. Ukongeza ekubeni nekhamera ejonge ngaphambili eyi-24 + 2 MP eya kuthi ngokuqinisekileyo isinike umgangatho omkhulu wokuthatha iiselfie, kunye nefuthe lebokeh kwifowuni. Emuva sifumana isivamvo somnwe.
Iikhamera yenye yamandla esixhobo, ebonisa amagumbi amabini aphindwe kabini esiphelweni ngasinye. Liqela leekhamera ezisebenzela ukubonisa inkqubela phambili enayo uphawu lwesiTshayina kule ndima. Kuxhaswe bubukrelekrele bokuzenzela, sineendlela ezongezelelweyo zokufota kuzo. Sine nani elikhulu lokucoca ubuhle kubo, eliza kusivumela ukuba sithathe iifoto ezintle ngalo lonke ixesha ngesi siphelo.
Ifowuni ikwahlula amandla ayo. Sifumana eyona processor ihamba phambili kwintengiso ngaphakathi, i-Snapdragon 845, ihamba ne-RAM efikelela kwi-10 GB kuhlobo lwayo olukhethekileyo. Uphawu lwaseTshayina lukwazile ukumangaliswa ngale ndlela, ngemodeli eya kuthi inike intsebenzo elungileyo. Sineendibaniselwano ezininzi zokugcina kwangaphakathi ezifumanekayo kule Xiaomi Mi Mix 3.
Ibhetri inkulu kule meko, inomthamo we-4.000 mAh. Ngokudityaniswa neprosesa esinayo kwifowuni, silindelwe kukuzimela okuhle, okuya kusinika ithuba lokusebenzisa ifowuni ixesha elide. Ukongeza, sifumana ukutshaja ngokukhawuleza nangaphandle kuyo. Siza kuba nazo zombini iindlela ezikhoyo.
Le Xiaomi Mi Mix 3 sele ihanjisiwe ngokusemthethweni e-China. Njengesiqhelo, ilizwe laseAsia liya kuba lelokuqala ukufumana esi sixhobo ngokusemthethweni. Okwangoku akukho nto sele ikhankanyiwe malunga nokuqaliswa kwale modeli kwiimarike ezintsha ezingaphandle kwe China. Into esithemba ukuba iza kwenzeka kungekudala.
Eyona nto isengqiqweni kukuba iya kuphehlelelwa kwilizwe jikelele, kodwa kuya kufuneka silinde inkampani ngokwayo ukuba ithethe ngakumbi ngayo. Iinguqulelo zefowuni kunye namaxabiso azo eTshayina zezi zilandelayo:
Inguqulelo ene6 / 128 GB: 3299 yuan (us 416 euros kutshintsho)
Inguqulelo ene-8/128 GB: i-3599 yuan (i-455 euro ukutshintsha)
I-Xiaomi Mi Mix 3 nge-8/128 GB: i-3999 yuan (malunga ne-505 euro ukutshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi Mi Mix 3: Isikrini sonke ngokuhambisa isikrini
Uyenza njani into yokuchwetheza ngelizwi ngaphandle kweintanethi kwiGBOard